Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Che Adams Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Che Adams na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya, umuntakiri ya, net Worth, ndu na ndu nke onwe.
Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu ihe ngosi nke Che Adams zuru ezu Akụkọ ndụ, na-amalite site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Lee nchịkọta ihe osise nke ndụ ya - nchịkọta dị jụụ nke Bio.
Che Adams akụkọ ndụ.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ ngwa ngwa ma sie ike na-arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ Che Adams na-atọ ụtọ. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Akụkọ Che Adams nke nwata
Maka ndi na - ebido ndu ndu, aha otutu ya bu Cheky. Ché Zach Everton Fred Adams a mụrụ na 13th nke July 1996 na nne ya, Frances na nna Caribbean, na Thurnby Lodge, Leicester, England.
Che Adams na-eto eto afọ:
You maara na Young Cheky tolitere na ebe amụrụ ya na Leicester City dị ka onye ofufe nke Foxes? N'ịbụ onye nke anọ a mụrụ na ụmụnne ya ndị tọrọ atọ, enweghi ọtụtụ ihe ọ na-eche banyere igbochi bọọlụ na ịga ụlọ akwụkwọ.
Che Adams ezinụlọ:
Anyị gbara ọsọ na Thurnby Lodge ebe amụrụ onye na-egwu egwu. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ ala dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Leicester nke ụmụ amaala bi na etiti.
Nke a na-eme ka anyị kwenyesie ike na Adams nwere obere oge nwata, n'ihi nne na nna ya ọfụma.
Che Adams ezinụlọ malitere:
Lelee mba bekee. You na-ahụ ederede agbụrụ ya niile? Anyị nzọ na ị mere. Che Adams nwere ezinụlọ sitere na Scottish site na nne ochie.
Na mgbakwunye, ọ nwere ike ikwu na ọ bụ nwa amaala mba Caribbean - Antigua na Barbuda. Nke a bụ ebe amụrụ nke nne na nna Che Adams - nna ya.
Che Adams Football Akụkọ:
Ọ ga-amasị gị ịmara na nwa anyị nwoke nwere ọtụtụ ọnwụnwa na Leicester City mana ọ dabaghị na njikwa ụlọ ọrụ dị ka atụmanya. N'ezie asim unu, Anaghi anabata eze ma-ulo.
N'ịga n'ihu, ọ nwere njikọ dị mkpa na bọl asọmpi na Highfield Rangers. N'oge na-adịghị anya tupu ya abanye na Coventry City ebe njem ya na football football malitere kwesịrị ekwesị.
Che Adams Biography - Afọ Ndị Mbụ na Nlekọta Ọrụ:
Onye na-eto eto Cheky nọrọ afọ 7 na Coventry City na-amụta ụdọ na eriri akpụkpọ ụkwụ ya maka ọrụ na-enwu gbaa. N'ụzọ dị mwute, Coventry hapụrụ ya mgbe ọ bụ nanị 14.
Mgbe a hapụsịrị ya anya na-atụghị anya ya, Adams ga-ahọrọ n'etiti ịchụso agụmakwụkwọ ya ma ọ bụ ịnọgide na-arụsi ọrụ ike na football.
N'ụzọ dị mma, nne na nna Che Adams kpaliri ya ịghara ịkwụsị inwe olileanya. Nwatakịrị ahụ gbakọtara ike wee si otú a maliteghachi azụ site n'ụzọ na-enweghị atụ nke bọọlụ na-abụghị otu.
Che Adams Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Nwatakịrị ahụ lụrụ ọgụ megide ụmụ nwoke n'ọgba aghara na egwuregwu na-abụghị egwuregwu, na-egwuri egwu maka uwe Leadestershire Oadby Town tupu ya enwee obere oge na Ilkeston.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ na Ilkeston ka Adams guzobere onwe ya dị ka onye na-achọkarị ihe ọkpụkpọ na bọl na-abụghị otu.
Hụ onye guzobere na Ilkeston.
Ihe ndekọ ya dị egwu nke ihe mgbaru ọsọ 11 na 9 na-enyere aka na 16 anya dị oke mma ileghara anya site na klọb 40 nke zipụrụ ndị na-egwu egwuregwu ka ha lelee ya ka ọ kpọọ n'otu oge. Sheffield United egbughị oge iji nweta ọrụ ya maka ego mbufe nke £ 135,000. Adams ga-emesị gwa ndị nta akụkọ na:
"A gaara m azọ ụzọ ahịa ọzọ ma ọ bụrụ na Sheffield abịanyeghị aka na m."
Che Adams Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ nke Ọma:
Mgbe ọ nwụsịrị na otu na Sheffield United, enweghị njedebe ịhụ ihe ịga n'ihu nwere ike ị nweta na bọl.
Ọ kwagara Birmingham City nke na-asọ asọmpi dị mma mgbe ọ gbanwere na Premier League n'akụkụ Southampton na-enwe mmeri. Nke a bụ vidiyo nke gosipụtara Nkwenye nke Che Adams ma kọwaa ihe mere ndị nsọ jiri bịanye aka na ya.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere isiokwu a na Che Adams nwata akụkọ na akụkọ ndụ ya, onye na-eti ihe bụ 4th nke kachasị nwee ụdị ọkpụkpọ na South Park (Ndị na-edekọ akụkọ).
Ọ na-ele anya ịkwaga ndị nsọ dị elu dị ka ndị otu ya Danny Ings, James Ward Prowse na Kyle Walker-Peters emeworu.
Kedu otu ụzọ si mee ya na St Mary stadium, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Che Adams Girlfriend?
Afọ bụ 2020, Cheky dị afọ iri abụọ na anọ ma anyị nwere ihe akaebe na ọ lụbeghị di. Achọpụtala enyi nwanyị Che Adams dị ka Amelia Kate. Ọ bụ nwa nwanyị nke na-ele anya dịka ọkara nke abụọ ya.
Lee Che Adams na nkera nke abụọ Amelia Kate.
Ha na-emekọ ihe niile ọnụ tinyere ezumike, a hụkwara ha ka ha na enyí na-ekpori ndụ na Elephant Jungle Sanctuary nke dị na Phuket.
Anyi achoghi dibia ozo igwa anyi na lovebirds nwere atumatu di nma maka odi n’ihu na ha g’abu di na nwunye.
Throwback ruo mgbe Che Adams na enyi ya nwanyị gara Elephant Jungle Sanctuary na Phuket.
Ndụ Adams nke ezinụlọ:
Nwa amaala Leicester enweghị ike ịkọ akụkọ banyere njem ya site na bọọlụ egwuregwu bọọlụ nke asaa ruo na Premier League na-enweghị itinye ndị mmadụ ụgwọ.
Ha bụ ezinụlọ ya. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ezinụlọ Che Adams. Ọzọkwa, anyị ga-akọwapụta eziokwu banyere ụmụnne ya na ndị ikwu ya ebe a.
Banyere Che Adams Nna:
Nna nke onye maara ihe n’egwuregwu bọọlụ abịaghị n’oge. Ya na Che kekọrịtara nkekọ nke na ọnwụ ya hapụrụ ọdịda na-enweghị ike ilekwasị anya na egwuregwu ya na Bingham.
Dịka anyị kwuburu, Nna Adams bụ nwa amaala Antigua na Barbuda. Anyị nwere ike ghara ịma ya site na aha ya, mana ihe nketa ya na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi n'obi ndị na-aga n'ihu.
Banyere Che Adams Nne:
Frances bụ nne nke na-aga n'ihu ma na-adọrọ mmasị na nke ahụ. Adams toro ya maka inyere ya aka iwulite ọrụ ịgba bọọlụ ya n’àjà. Dị ka ya:
“Mama m na-akpọkarị m agafee mba a na-egwu bọl mgbe niile. O mere m onye m bụ taa. ”
Banyere ụmụnne Che Adams na ndị ikwu ya:
Onye gburu ya nwere ụmụnne nne okenye atọ ndị ọ ka ga-ekpughe. O nyebeghị ihe ndekọ banyere usoro ọmụmụ ya, ọkachasị nke nne na nna ya na nna nna ya. N'otu aka ahụ, nwanne nna Che Adams, nwanne nna ya, na nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya amabeghị.
Ndụ nke Onye Adam:
Kedu onye na-aga n'ihu karịa ime ka ndị na-agbachitere ndị mmegide na-atụ ụjọ mgbe ọ na-anwa iso usoro ya dị ịtụnanya? Maka ndị na-ebido ebido, Che Adams gosipụtara omume mmadụ nke akara aka ya bụ Ọrịa Cancer.
Ndị enyi na ndị otu egwuregwu nwere ike ịgba akaebe maka omume nlekọta ya, oke ike, njigide na mmụọ nwere mmụọ.
Ọ na-atọ ya ụtọ ịnọnyere ma mara ihe ziri ezi ikwu n'oge ọ bụla. Adams nwere mmasị igwu mmiri na ezumike. Egwuregwu vidio dịkwa n'elu ndepụta nke mmasị na ihe omume ntụrụndụ ya.
Mgbe ọ na-egwu mmiri ọ na-ese n'elu mmiri, n'ụzọ ọ bụla, ọ hụrụ ya n'anya n'ime mmiri.
Che Adams si ebi ndụ:
Ka anyị tụlee etu Forward si enweta ma mefu ego ya. Iji malite, atụmatụ nke ụgbụ ya bara uru na 2020 na 5 Nde Euro.
Adams nwere ike inweta akụnụba a site na ọrụ ya dị afọ iri na otu, egwuregwu, na Premier League.
N'ezie, ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ya na ndị nsọ na 2019 nke ga-eme ka ọ na-enweta £ 1,560,000 kwa afọ. Adams nwere ike ọ gaghị anọ n'etiti ndị akwụ ụgwọ kacha elu na Southampton, mana ụgwọ ya kwa izu nke £ 30,000 nwere ike ị nweta ya ụgbọ ala ọ bụla na ụlọ dị oke ọnụ ọ chọrọ.
Eziokwu banyere Che Adams:
Iji kechie ihe mmụta a dị omimi banyere akụkọ nwata na akụkọ ndụ Cheky, nke a bụ obere ihe amachaghị ma ọ bụ Eziokwu banyere ya.
Kwa Afọ £ 1,560,000
kwa ọnwa £ 130,000
Kwa Izu £ 29,954
Kwa .bọchị £ 4,279
Kwa elekere £ 178
Kwa Nkeji £ 3
Sekọnd £ 0.05
Na UK, nkezi onye na-akpata, 36,611 kwa afọ ga-arụ ọrụ maka ihe dịka afọ 42 na ọnwa 6 iji mee ụgwọ ọnwa kwa afọ na Southampton. Nke a bụ ihe ọ na - enweta oge ọ bụla n’oge edere Bio ya.
Nke a bụ ihe Che Adams rụpụtara kemgbe ị malitere ịgụ akụkọ ndụ ya.
Ọdịnihu ka ga-ekpughe ọnọdụ ya n'okwu nke okwukwe. Otú ọ dị, nsogbu ndị ahụ na-amasị ndị nne na nna Che Adams na-azụlite ya ịbụ onye kwere ekwe.
Karịsịa onye na-eme Iso Christianityzọ Kraịst. Agbanyeghị, ị na-anabata gị ịkekọrịta echiche gị banyere ya na igbe igbe dị n'okpuru.
Eziokwu # 3 - FIFA 2020 Ntụle:
Che Adams nwere akara ngosi na-adịghị mma nke ihe 74. Na mgbakwunye, o nwere obere ikike nke 79.
Anyị ghọtara na onye na-eti ihe bụ ihe ọhụrụ na bọọlụ kachasị elu na ekwesịghị inwe atụmanya dị elu nke ọnụọgụ maka ya. Ma ọ dịkarịa ala erubeghị.
Na-adighi mma ma odi nma maka mbido.
Daalụ maka ịgụ nke a na-etinye aka na edemede Che Adams biography. Anyị nwere olile anya na ọ kpalitela gị na ụzọ ịga nke ọma nwere ike ịbụ ihe dị anya site na ọdịiche. Were ihe atụ sitere n'aka Adams onye mgbe etinyere ya na agụmakwụkwọ, wuru onwe ya na klọb ndị na-abụghị otu wee rụọ ọrụ ya.
Ugbu a, anyị ga-aja nne na nna Che Adams mma maka ịtụkwasị obi na usoro ọrụ ọrụ ya na-adịghị mma. Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. You hụla ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na ndu a? mee nke ọma ịkpọtụrụ anyị. Ma ọ bụghị ya, hapụ okwu n'okpuru banyere echiche gị na Adams.
Aha n'uju Ché Zach Everton Fred Adams
aha otutu Cheky
Ụbọchị ọmụmụ 13th nke Julaị 1996
Ebe amụrụ onye Thurnby Lodge na obodo Leicester. England.
enyi nwanyị Amelia Kate
omume ntụrụndụ Igwu, ezumike na igwu egwuregwu vidio
Ngwakọta Net Nde Euro 5
ụgwọ £ 1,560,000 kwa afọ
elu 5 ụkwụ, 9 sentimita asatọ